कृष्णप्रसाद !!!! – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
मंसिर १७, २०७७ १४:५४ मा प्रकाशित
पोखरा, १७ मङ्सिर २०७७: केशव सापकोटा
आजको दिन अलि बेग्लै छ,घाम झुल्किनु भन्दा अघि उठेको छ कृष्णप्रसाद नुहाइ धुवाइ सकेर आज त भजन पो गाउन थाल्यो उ।आज मौसम सफा छ ,आकाश खुलेको छ,न घाम न पानी अति रमाइलो छ आज!एक नजर उदाउँदो सुर्य लाई हेरेर लामो स्वास फेर्छ कृष्णप्रसाद, छोराछोरी उठ्दा चिया पाकी सकेको छ,सब थोक शान्त छ आज,हेरेर लाग्छ चारै तिर चैन ,खुशी छ,शान्त हावा,शान्त सुर्य को तेज,शान्त मौसम अनि शान्त प्रफुल्ल कृष्णप्रसाद।
कृष्णप्रसाद को हसिलो अनुहार देखेर उसका छोराछोरी,श्रीमति सबै परिवार दङ्ग छन् । आज कृष्णप्रसाद ले छोरालाई कागजको भ्यागुता बनाउन सिकायो,छोरीलाई मादल बजाउन सिकायो,श्रीमतिलाई भान्साको काम सगायो । आज किन सबथोक बेग्लै छ? के हो आज? खाना खाइसकेर भान्सामा फर्केर नहेर्ने उस्ले आज भान्सामा गएर सोध्यो ;के थपिदिउ? के खाने? `अलिकति घ्यू´सानो छोरा ले बोल्यो ।आज भरे आउँदा म घ्यू लिएर आउने छु।
छोराछोरी सोध्छन्,आमा आज बा लाई के भएको हो? के हो आमा आज? साच्चै के चै हो आज? के आज कृष्णप्रसादको जन्मदिन हो?होइन !हुनै सक्दैन ,उसको जन्मदिन कहिले आउँछ जान्छ उसलाई पत्तै हुदैन । त्यसै पनि आफू जन्मिएकोमा कुनै गर्व छैन कृष्णप्रसादलाई ।त्यसो भए के हो त आज ?
चौथो महिना लागि सकेको रहेछ,आज त तलब आउने दिन पो रहेछ कृष्णप्रसादको । उ आज श्रीमतिलाई च्यात्तिएका तन्ना फेर्ने बाचा गर्दै छ, छोरीलाई नयाँ कलम र कापी ल्याइदिने बाचा गर्दै छ । हरेक चौथो महिनाको कुनै एकदिन आशाको किरण बनेर आउँछ उस्का लागि । यी सानासाना सपना आज त पक्कै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ उसलाई । गयो आज पनि उ उसै गरि सपना पुरा गर्न । सपना पुरा गर्न साधक सम्म पुग्दा नपुग्दै झसङ्ग भयो उ ।
परारसाल पहिरोले घर बगाएर लग्दा जसोतसो बाचेका उ र उसका जहान राहत पाउनका लागि सबथोक हारेका पनि त थिएनन् उस्को सम्पत्तिको नाममा १०रोपनी खेत छदै थियो फेरि उसको जागीर पनि त थियो ।तर ओत लाग्ने छत नहुदा बुडाघरे बैधार काका सङ ऋण लिएर एउटा टहरो बनाएको थियो कृष्णप्रसादले। बैधार काकाको साहुब्याज चुक्ता पनि त गरिसकेको छैन उस्ले । शिरमा ऋणको बोझ बोकेर घ्यू खादै बस्न पनि कहाँ सक्थ्यो र उ।
लिएर आएको तलब तिर्दै गयो,बैधार काका को ब्याज (साहु त यसपाली पनि तिर्न सकेन)टहरो बनाउदा ल्याएको जस्तापाताको पनि त पैसा बाकी नै छ । पोहोरसाल छोरीलाई निमोनिया भएर मुस्किल बचाउन सकेको थियो उस्ले । ठुलाघरे दाजुले एकलाख रुपैया ऋण नदिएको भए भाग्यलाई दोष दिदै छोरीको वियोगमा आशु बगाउदै हुन्थ्यो होला उ ।
नचाहदा नचाह्दै कृष्णप्रसाद बनेको थियो उ। तर उसलाई आफ्ना सन्तान पनि कृष्णप्रसाद बनुन भन्ने थिएन । कृष्णप्रसादले सब हारेको भनौ भने, परिवार छ, माया छ, ममता छ, घर छ, धान फलाउने खेत बारी छ । जिते को ,पाएको भनौ भने खै के जित्यो र के पायो र उसले।उ फाटेको कमिज झुत्रो नहुन्जेल सम्म सिलाएर लगाउछ,उ खाजा होइन फिका चिया मात्र खाएर भोक मेटाउछ।उ यसै गरि छोराछोरीको विद्यालयको फिस भर्छ । उ चाहदैन कि उसका छोराछोरी पनि उ जस्तै कृष्णप्रसाद बनुन । उसले छोराछोरी लाई निजि विद्यालयमा भर्ना गर्‍यो ।
साझ घर फर्कियो कृष्णप्रसाद तर खोइ त्यो प्रातकाल को चमक,खै त्यो खुसी ,खै नयाँ तन्ना,खै नयाँ नाना,खै कापी कलाम अनि खै बिहान ल्याउछु भनेर बाचा गरेको घ्यू ? उ रित्तै फर्किएको छ रित्तै पनि के भन्नौ उ फेरि तिनै आशा र सपना बोकेर फर्किएको छ तेहि सपना जुन कृष्णप्रसादका बा ले उसका लागि सजाएका थिए । आज उ तेहि सपना आफ्ना सन्तानका लागि सजाइ रहेको छ। यो सपना खाना नाना र छानाको मात्र थिएन ,बर्षौ देखिको दासताबाट मुक्त हुने सपना थियो यो ।
कृष्णप्रसादका बा ले आफू अनपढ भएकै कारण ,अशिक्षित ,अचेत भएकै कारण दासतासंग सम्बन्ध गास्नु परेको थियो तर कृष्णप्रसाद त पढेलेखेको मान्छे , सचेत नागरिक थियो फेरि पनि आफ्ना बा हरु जस्तै दास नै छ । पसिनाका धारा बगाए पनि, हातका नङ्रा खियाए पनि उसलाई दुई छाक खान किन धौधौ पर्छ ? उस्को चाहना छ कि उस्का सन्तान कृष्णप्रसाद नबनुन उ पनि आफ्ना बा हरु ले जस्तै ,उसका सन्तान ठुल्ठुला पदका जागीरे होउन् ।
कृष्णप्रसादले मुक्तिका लागि फेरि पनि दासता कै बाटो रोज्यो पुनः नचाहदा नचाहदै अर्को कृष्णप्रसादको जन्म हुनेछ। गरोस पनि के र उसले ,उसको भोक को कथा बिक्छ,उसको आशु ,भावना कसैको बजारको बिकाउ माल हो,उस्को भोक कसैको सत्ताको सिढी बनेको छ, शक्तिको बिम्ब बनेको छ । धेरै लडाइँ लडिए कृष्णप्रसादहरुका लागी तर आज पनि कृष्णप्रसादहरु कृष्णप्रसाद नै छ्न, मुक्तिका लागि झिनो प्रयास गर्दागर्दै फेरि तेहि भुमरीमा फस्छन अनि फेरि तेहि खाना,नाना र छाना कै संघर्ष।